विचार - Hamro Bulletin
कन्टिर–बाबू भन्छन्– नेपालीले वर्षमा एकदिन सम्झिनेमध्ये एक श्रद्धेय हुन्, नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त । र, भानुलाई सम्झने त्यो दिन हो असार २९ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज पाँचौँ पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । देउवा सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा बढीपटक प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति हुन् । सर्वोच्च अदालतको सोमबारको परमादेशपछि देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव भएको हो । अदालतको यसै आदेशपछि करिब दुई–तिहाइको बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको सत्ता बहिगर्मन पनि निश्चित भएको हो ।
देश र समाजलाई जोड्ने र तोड्ने सम्बन्धमा शास्त्रीय रूपमा संयोजक (कनेक्टर) र विभाजक (डिभाइडर)को भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुने कुरा कन्टिर–बाबूले बडो राम्ररी बुझेका छन् । तर कुनबेला कुन कुराले संयोजक र कुन कुराले विभाजकको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुराचाहिँ अवस्था र परिवेशमा भर पर्ने कन्टिर–बाबूको ठहर छ ।
कन्टिर–बाबू कहिलेकाहीँ सोच्छन्– आखिर यो देश चलाउँछ कसले ? सायद यहाँ सत्ताभित्रका हरूको भन्दा बाहिरका हरूको हालीमुहाली बढी छ ।
तराई–मधेसमा एक लोकोक्ति बडो प्रचलित छ– जाने मधेसिया तोरे इमान ! जब कुनै व्यक्तिमाथि संशय हुँदाहुँदै पनि विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भने प्रायः यो लोकोक्तिको प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
कन्टिर–बाबू बजेट घोषणा भएको दिनदेखि बडो छक्क परिरहेका छन् । अरे लोकप्रिय बन्ने नाममा, कार्यकर्ता पाल्ने नाममा, सत्तामा बसेर चुनाव जित्ने नाममा जे पनि गर्ने ? मिल्छ यसो गर्न ? चुरे–भावर क्षेत्रको सुरक्षा र संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने विगत वर्षहरूदेखि कुरा उठ््दै आएको हो तर यस दिशामा पछिल्ला कुनै पनि सरकारले कुनै ठोस कार्य गर्न नसकेको विडम्बनापूर्ण परिस्थिति कन्टिर–बाबूले देखी–भोगी आएका छन् ।
‘म खाऊँ मै लाऊँ सुख–सयल वा मोज म गरुँ, म बाँचू, मै नाचूँ, अरू सब मरुन् दुर्बलहरू । भनी दाह्रा घस्ने अबुझ सठदेखि छक परी चिता खित्का छोडी अभयसित हाँस्यो मरिमरी ।’
पहिले प्रयोग गर्थे, अहिले प्रयोग हुन्छन् !
रोपे पेड बबुरका आम कहाँ से पाए ? मधेसमा निकै लोकप्रिय यो लोकोक्ति कन्टिर–बाबू पनि बेलाबखत सम्झिन्छन् । यसको सामान्य अर्थ हुन्छ– रूख भने बबुर (काँडायुक्त पोथ्रा)को रोप्ने अनि फलचाहिँ आँप फलोस् भनी अपेक्षा गर्ने । यस्तो कसरी सम्भव हुन्छ ? कुरो क्लियर छ, जेको फल खाने इच्छा छ, बिरुवा त्यसकै रोप्नुपर्छ ।
राज्य र समाजको गालामा गतिलो झापड
हास्य–व्यङ्ग्यका क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य अर्थात् क्यारियरका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका प्रदेश २ बाराका आदर्श यतिखेर पिता विनोदको असामयिक देहावसानका कारण शोक र पीडा बेहोर्न बाध्य छन् । कन्टिर–बाबू अमर आत्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोक–सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्छन् ।
ओलीटिक्सका बारेमा लेख्दिनँ भन्दा–भन्दै …!
खासमा कन्टिर–बाबूलाई आज केही लेख्ने कुनै मुड नै चलेको छैन । घुमिफिरी त्यही पोलिटिक्स अर्थात् राजनीति अनि त्यही ओलीटिक्स अर्थात् ओल्बा–कृत्यका बारेमा कति लेख्नु ?
सुरुमा अध्यादेश, त्यसपछि सिध्यादेश !
ले घास, आखिर ओल्बाले जे कानेखुसी गरेका थिए रापबाट त्यही फरमान जारी भयो मध्यराति । अघिल्लो फरमानअनुसार बिहीबार दिउँसो विपक्षी दलहरू नयाँ सरकार बनाउन बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर शीतलनिवास पुग्दा ओल्बा शीतल निवासबाट के–के कानेखुसी गरीवरी फर्किँदै थिए ।
न विधि न व्यवस्था, न नीति न नैतिकता
कहीँ नभएको जात्रा त्यो गाउँमा भनेको सुनेर कन्टिर–बाबूले एक जना बुजुर्गलाई सोधे– त्यो भनेको के हो बा ? बुजुर्गले भने– त्यो गाउँमा जस्तो जात्रा हुन्छ, त्यस्तो जात्रा संसारमा अन्त कतै पनि हुँदैन भन्थे पुर्खाले, त्यही उखान सम्झेको नि !
करिव बिस बर्ष अघिको प्रसंग, सन्दर्भ चाहिँ अहिलेको
कुरा नेपालगन्जको महेन्द्र रंगशालामा भएको एक फुटबल प्रतियोगिताको हो । पश्चिम नेपालको ठूलो रंगशालामा खुकुरी गोल्ड कप प्रतियोगिता चलिरहेको थियो । उक्त प्रतियोगितामा उपत्यका बाहिरका टिम र काठमाडौका ए डिभिजनका क्लब बिच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । प्रतिस्पर्धा कस्तो बाघ र बिरालोको जस्तो । उतिबेला खेलकुद पत्रकारितामा सक्रिय म खेल हेर्न नियमित रंगशाला पुग्थे ।
नेपाल देशको राजनीतिक जीवनमा आजको दिन बडा महत्त्वपूर्ण छ । विपक्षीले सांसदको धार्नी पु¥याउन सक्ने हुन् कि होइनन् ? पुगे त ओल्बा कुर्सीबाट ओर्लने सम्भावना बढ्छ, होइन नेपाली जनताको घाँटीमा अड्केको खिचखिच यथावतै रहनेछ । यस्तो बेला हिन्दीको एउटा उखान सम्झन्छन् कन्टिर–बाबू– ढाक के तीन पात ! तर यो त पुरानै कुरा हो । सत्ताको बिजगणित विश्लेषणका सन्दर्भमा कन्टिर–बाबूलाई नयाँ–नयाँ उखान–टुक्का फुर्दै छ, आज बिहानैदेखि ।
जतिसुकै तर्क–वितर्क गरे पनि सरकारको क्षमता मूल्याङ्कन कठिन समयमै हुने हो । सहजतामा त देश आफैँ चलिहाल्छ नि ! यो भनाइसँग कन्टिर–बाबू पूर्णतः सहमत छन् । वास्तवमा अप्ठेरोमा नै हो व्यक्तिलाई सहयोग र भरथेग चाहिने हो, सजिलो अवस्थामा त जनता आफैँ काबिल छँदै छन् नि !
कन्टिर–बाबू आज अङ्क–गणितको कुरा गर्दैनन् । वैशाख २७ गते संसदभित्र भएको निर्वाचन परिणामअनुसार नेपाली सत्ता राजनीतिको अङ्क–गणितीय हिसाबमा को कति पानीमा रहेछ भन्ने सब छर्लङ्ङ भइ नै सकेको छ । अब संसदीय बिज–गणित र ज्यामितिको योगफल तथा परिणाममात्र थाहा पाउन बाँकी छ । त्यसैले कन्टिर–बाबू पनि यस बेला अरू नेपालीजस्तै पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् ।